UMKHANDLU WETHEKU NOHLELO LOKUXHUMANA NOMPHAKATHI NGEZINHLELO ZAWO – Sivubela intuthuko Newspaper
uKhansela Mxolisi Kaunda ngesikhathi emukelisa itayitela ilungu lomphakathi
IMEYA yoMkhandlu weTheku, uKhansela uMxolisi Kaunda ihambele umphakathi waseMnini, eMgababa ngenhloso yokuxhumana nalo mphakathi mayelana nohlahlomali olusahlongozwa luka-2021/2022.
UKhansela uKaunda ukhulume nangohlelo olumqoka kakhulu oluqhubekayo olubizwa ngokuthi yi-Intergrated Development Plan nolunye olubizwa ngokuthi yiSpatial Development Framework. Zombili lezi zinhlelo ziyaqhubeka kuyona le ndawo.
UMeya weTheku ngalolu suku wethulele amalunga omphakathi waseMnini uhlahlomali olulinganiselwa ku-R52, 3 billion.
Lolu hlahlamali uthe akalwethuleli nje abantu baseMnini kuphela kodwa nabavela ezindaweni ezahlukene ezakhelene nale ndawo.
Lolu hlahlomali lumayelana nokwenza ngcono izimpilo zabantu kanjalo nokuletha uzinzo lwangempela emphakathini wabantu. UKhansela uKaunda uthe akangabazi ukuthi lolu hlahlomali luzobuyisa ithemba ngempilo kubantu abaningi bakule ndawo.
Uchaze lolu hlahlomali njengolumqoka kakhulu ikakhulukazi kulesi sikhathi esibucayo kangaka sokuzika komnotho mawala okubangelwe ukuvumbuka kokhuvethe lweCorona okuthikameze izwe lonke, yizwekazi i-Afrika kanye nomhlaba nje wonkana.
Ngalolu suku uMeya uKhansela Mxolisi Kaunda unikezele ngosizo lwezindlu emindenini engu-15 yaseKingsburg West. Ukunikezelwa kwabantu ngosizo lwezindawo zokuhlala uthe uhlelo olumqoka oluseqhulwini kuMkhandlu weTheku.
Kuhlakukile lapha ukuthi ukwethulwa kohlahlomali olungakaphothulwa kusazoqhubeka kwethulwe nakwezinye izindawo ezakhele iDolobha iTheku.
Lokhu uMeya uKhansela Mxolisi Kuanda uthe kuzoqhubeka kuze kube usuku lokugcina lomhlaka-15 May.
UKhansela uKaunda ukuchaze njengento emqoka kakhulu ukuxhumana nomphakathi ikakhulukazi mayelana nezinhlelo zoMkhandlu.
“Sihlose ukuthi sixhumane nabo bonke abantu mayelana nezinto ezahlukene eziqhubekayo emphakathini. Phakathi kwezinye zezinto esixhumana ngazo namalunga omphakathi kumayekana nokwakhiwa kwezindlu, ukulungiswa kwemigwaqo kanye nokunikezelwa kosizo lwamanzi emphakathini wabantu,”echaza.
Esephetha uMeya uKuanda uthe kumqoka kakhulu ukuba abantu bathole ithuba lokuphefumula mayelana nohlahlomali oluthinta bona ngqo. “Lokhu esikwenzayo namhlanje kokuxhumana nabantu yinto emqoka kabi. Akusiyona inkulumo ngxoxo nje engatheni,’’ephetha.